Xukun Lagu Riday Ka Gancsi jir - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xukun Lagu Riday Ka Gancsi jir
La daabacay tisdag 2 november 2010 kl 12.57
Kadib xukunkii maxkamadda.Foto: Stig-Åke Jönsson
Wiilkii 18-jirka ahaa ee lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay fal-dembiyeed la xiriira ka-ganacsi jir banii’aadam ayay maanta maxkamadi ku xukuntay saddex sannadood oo xarig ah.
Halka nin ka mid ahaa eedeeysaneyaashii oo da’diisu tahay 35 jir lagu riday xukun ah saddex sannadood iyo lix bilood isagoona lagu oogay dembiga ah kufsi dhallaan, ka-ganacsi jir banii’aadam nooca adag, iyo nin 51 jir ah oo lagu xukumay laba sannadood oo xarig ah laguna oogay dembiga ah kufsi dhallaan.
Shan ka mid ah raggii dacwooyinka lagu soo oogay oo tiradoodu dhammeeyd toban ayaa oodda laga qaaday, halka wiil 27 jir ah lagu xukmay xabsi sannad ah isagoona lagu eedeeyey khiyaamo, wiil 17 jir ahna lagu xukumey ganaax dembiga lagu eedeeyeyna ahaa inuu iibsaday galmo. Garyaqaanka ayaa ku andacooday in raggaa lagu soo oogo dembiga ah ka ganacsi banii’aadam, hase yeeshee aanan midkoodna lagu xukumin.
Dembigan fataalidda ah ayaa maxkamad lagu soo oogay toban nin oo lagu eedeeyey iney kufsadeen ama oogadeeda isticmaaleen gabar 14 jir ah, islamarkaana aanay maskaxdeedu dhammayn.